အီးမေးလ်တွင် UTM ပါရာမီတာများသည် Google Analytics ကမ်ပိန်းများနှင့် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ | Martech Zone
အီးမေးလ်တွင် UTM ပါရာမီတာများသည် Google Analytics ကမ်ပိန်းများနှင့် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2022 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ပြောင်းရွှေ့မှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု ပရောဂျက်များကို အနည်းငယ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အလုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် မကြာခဏမဖော်ပြထားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲအသုံးပြုနေသည့် ဗျူဟာတစ်ခုမှာ အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုတိုင်းကို သေချာစေပါသည်။ UTM ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် အလိုအလျောက် တဂ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ဆိုက်အသွားအလာအပေါ် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သတိပြုနိုင်စေရန်။ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုလေ့ရှိသော အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်... သို့သော် မဖြစ်သင့်ပါ။
UTM Parameters တွေက ဘာတွေလဲ။
UTM အတိုကောက် Urchin ခြေရာခံခြင်း module. UTM ကန့်သတ်ချက်များ (တစ်ခါတစ်ရံ UTM ကုဒ်များဟု လူသိများသည်) သည် Google Analytics အတွင်းရှိ သင့်ဝဘ်ဆိုက်သို့ ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်များအကြောင်း အချက်အလက်ကို ခြေရာခံရန် URL ၏အဆုံးတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် အမည်/တန်ဖိုးအတွဲတစ်ခုရှိ ဒေတာအတိုအထွာများဖြစ်သည်။ မူရင်းကုမ္ပဏီနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် ပလပ်ဖောင်းကို Urchin ဟုခေါ်သောကြောင့် နာမည်မှာ ကပ်နေပါသည်။
ကမ်ပိန်းခြေရာခံခြင်းအား ဝဘ်ဆိုက်များရှိ အခပေး ကမ်ပိန်းများမှ ကြော်ငြာများနှင့် အခြားသော လွှဲပြောင်းပေးသည့် အသွားအလာများကို ဖမ်းယူရန် မူလက တည်ဆောက်ထားသည်။ သို့သော် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါကိရိယာသည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်အတွက် အသုံးဝင်လာသည်။ အမှန်မှာ၊ ယခုအခါ ကုမ္ပဏီများစွာသည် အကြောင်းအရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာရန်နှင့် ခေါ်ဆိုမှု-လုပ်ဆောင်ရန် အတွက်လည်း ၎င်းတို့၏ဆိုက်များအတွင်း ကမ်ပိန်းခြေရာခံခြင်းကို အသုံးချနေပြီဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကွက်များပေါ်တွင် UTM ဘောင်များကို ထည့်သွင်းရန် ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် မကြာခဏ အကြံပြုလိုသည် (CRM) ဦးဆောင်သူများ သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ်အသစ်များအတွက် အရင်းအမြစ်ဒေတာ ရှိသည်။
အဆိုပါ UTM parameters တွေကို ခေါင်းစဉ်:
utm_ အကြောင်းအရာ (ရှိလျှင်)
UTM Parameters များသည် ဦးတည်ရာ ဝဘ်လိပ်စာသို့ ပေါင်းထည့်ထားသည့် querystring တစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည် (URL ကို) UTM Parameters ပါရှိသော URL တစ်ခု၏ ဥပမာမှာ ဤအရာဖြစ်သည်-
ထို့ကြောင့် ဤတိကျသော URL ကို မည်သို့ခွဲခြမ်းထားသည်ကို ဤအရာဖြစ်သည်-
Querystring (အားလုံးနောက်မှာ ?):
အမည်/တန်ဖိုးအတွဲများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲထားသည်။
querystring variable များဖြစ်သည်။ URL ကို ကုဒ်လုပ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အချို့သောအခြေအနေများတွင် space များသည် ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် တန်ဖိုးရှိ %20 သည် အမှန်တကယ် နေရာလွတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Google Analytics တွင် ဖမ်းယူရရှိသည့် အမှန်တကယ်ဒေတာမှာ-
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး - ငါ့မဲဆွယ်
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်းအများစုတွင် အလိုအလျောက်လင့်ခ်ခြေရာခံခြင်းကို သင်ဖွင့်လိုက်သောအခါ၊ ကမ်ပိန်းသည် မကြာခဏဆိုသလို ကမ်ပိန်းကိုသတ်မှတ်ရန် သင်အသုံးပြုသည့် ကမ်ပိန်းအမည်ဖြစ်သည်၊ အရင်းအမြစ်သည် မကြာခဏဆိုသလို အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ကြားခံကို အီးမေးလ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်၊ ဝေါဟာရနှင့် အကြောင်းအရာ ပုံမှန်အားဖြင့် လင့်ခ်အဆင့်တွင် (အားလုံးလျှင်) တပ်ဆင်ကြသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် UTM ခြေရာခံခြင်းကို အလိုအလျောက်ဖွင့်ထားသည့် အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပလပ်ဖောင်းတွင် ၎င်းတို့ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် သင်အမှန်တကယ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။
UTM Parameters တွေက Email Marketing နဲ့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
အသုံးပြုသူ ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ပြီး ဒါက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။
Track Links များကို အလိုအလျောက် ဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် သင့်ကုမ္ပဏီမှ အီးမေးလ်ကမ်ပိန်းကို စတင်ပါသည်။
အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် အီးမေးလ်ရှိ အပြင်ထွက်လင့်ခ်တစ်ခုစီအတွက် UTM ဘောင်များကို အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပေးပါသည်။
ထို့နောက် အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ခရီးဆုံး URL သို့ပေးပို့မည့် ကလစ်ခြေရာခံလင့်ခ်တစ်ခုဖြင့် ပြင်ပလင့်ခ်တစ်ခုစီကို အပ်ဒိတ်လုပ်ကာ UTM ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုစာကြောင်းကို ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ပေးပို့လိုက်သော အီးမေးလ်စာကိုယ်အတွင်းရှိ လင့်ခ်ကို ကြည့်ရှုပါက... ဦးတည်ရာ URL ကို အမှန်တကယ် မတွေ့ရတော့ပါ။
မှတ်ချက်- URL တစ်ခုအား မည်ကဲ့သို့ ပြန်ညွှန်းသည်ကို စမ်းသပ်ကြည့်လိုပါက၊ သင်သည် URL ပြန်ညွှန်သည့် စမ်းသပ်သူကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘယ်သွားမလဲ။.
စာရင်းသွင်းသူသည် အီးမေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး ခြေရာခံပစ်ဇယ်သည် အီးမေးလ်ဖွင့်သည့်ဖြစ်ရပ်ကို ဖမ်းယူသည်။ မှတ်ချက်- အချို့သော အီးမေးလ် အပလီကေးရှင်းများက ဖွင့်ထားသော ဖြစ်ရပ်များကို စတင်ပိတ်ဆို့နေပါသည်။
စာရင်းသွင်းသူသည် လင့်ခ်ကို နှိပ်သည်။
လင့်ခ်ဖြစ်ရပ်ကို အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူက ကလစ်ဖြင့်ဖမ်းယူပြီးနောက် UTM ကန့်သတ်ဘောင်များထည့်သွင်းထားသည့် ဦးတည်ရာ URL သို့ ပြန်ညွှန်းသည်။
စာရင်းသွင်းသူသည် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ရောက်သွားပြီး စာမျက်နှာပေါ်ရှိ Google Analytics script သည် စာရင်းသွင်းသူ၏ session အတွက် UTM ဘောင်များကို အလိုအလျောက်ဖမ်းယူပြီး ဒေတာအားလုံးကို ပေးပို့သည့် ဒိုင်းနမစ်ခြေရာခံပစ်ဇယ်မှတစ်ဆင့် Google Analytics သို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ကာ သက်ဆိုင်ရာဒေတာများကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ပြန်လာမှုအတွက် စာရင်းသွင်းသူ၏ဘရောက်ဆာပေါ်ရှိ Cookie တစ်ခုအတွင်း။
ထိုဒေတာကို Google Analytics တွင် စုဆောင်းပြီး သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့် ၎င်းကို Google ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကဏ္ဍတွင် အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကမ်ပိန်းတစ်ခုစီကိုကြည့်ရှုရန်နှင့် ကမ်ပိန်း၊ အရင်းအမြစ်၊ အလယ်အလတ်၊ သက်တမ်းနှင့် အကြောင်းအရာတို့ကို အစီရင်ခံရန် မှာယူမှု > ကမ်ပိန်း > ကမ်ပိန်းများအားလုံးသို့ သွားပါ။
ဤသည်မှာ အီးမေးလ်လင့်ခ်များကို UTM ကုဒ်လုပ်ပြီး Google Analytics တွင် ဖမ်းယူပုံ၏ ပုံကြမ်းဖြစ်သည်။
UTM ကန့်သတ်ချက်များကိုဖမ်းယူရန် Google Analytics တွင် ကျွန်ုပ်ဘာကို Enable လုပ်မည်နည်း။
သတင်းကောင်းပါ၊ UTM Parameters များကိုဖမ်းယူရန် Google Analytics တွင် မည်သည့်အရာကိုမျှ ဖွင့်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သင့်ဆိုက်ပေါ်တွင် Google Analytics တဂ်များတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ၎င်းကို စာသားအတိုင်း ဖွင့်ထားသည်။
ကမ်ပိန်းဒေတာကို အသုံးပြု၍ ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ကျွန်ုပ်မည်ကဲ့သို့ အစီရင်ခံမည်နည်း။
ဤဒေတာကို စက်ရှင်တွင် အလိုအလျောက် ပေါင်းထည့်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့် UTM ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ဆင်းသက်ပြီးနောက် စာရင်းသွင်းသူသည် သင့်ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ သင်သည် စကားပြောင်းခြင်း၊ အပြုအမူ၊ အသုံးပြုသူ စီးဆင်းမှုများ၊ ပန်းတိုင်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အစီရင်ခံစာကို တိုင်းတာနိုင်ပြီး ၎င်းကို သင်၏အီးမေးလ် UTM ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် စစ်ထုတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်တွင် စာရင်းသွင်းသူ မည်သူကို အမှန်တကယ်ဖမ်းယူရန် နည်းလမ်းရှိပါသလား။
ထို့နောက် ၎င်းတို့၏ ဝဘ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို စနစ်များကြားတွင် တွန်းဆွဲတင်ရန် unqiue စာရင်းသွင်းသူ ID ကို သင်ဖမ်းယူနိုင်သည့် UTM ဘောင်များအပြင် နောက်ထပ် querystring variable များကို ပေါင်းစပ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါ... ဟုတ်တယ်၊ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အလုပ်နည်းနည်းတော့ လိုအပ်တယ်။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖြစ်သည်။ Google Analytics ၄ဧည့်သည်တိုင်းတွင် ထူးခြားသော identifier ကို အသုံးချနိုင်စေသော၊ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် Salesforce ကို အသုံးပြုနေပါက၊ သင်သည် ကမ်ပိန်းတိုင်းနှင့် Salesforce ID တစ်ခုကို အသုံးချနိုင်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်ကို Salesforce သို့ပင် ပြန်တင်နိုင်သည်။
သင်ဤကဲ့သို့သောဖြေရှင်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်စိတ်ဝင်စားပါက သို့မဟုတ် သင့်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွင် UTM ခြေရာခံခြင်းဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအခြားစနစ်သို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်ရှာဖွေနေပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီသို့ လွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ပါ။ Highbridge.
Tags: စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကလှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းအရာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအလတ်စားမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအမည်လှုံ့ဆော်မှုအရင်းအမြစ်မဲဆွယ်ကာလအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအီးမေးလ်စျေးကွက်အီးမေးလ်ကဝန်ဆောင်မှုပေးanalytics googleGoogle Analytics စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခြေရာခံခြင်းGoogle Analytics စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခြေရာခံ urlအလယ်အလတ်အီးမေးလ်လင့်ခ်များကို ခြေရာခံပါ။လင့်ခ်များကို ခြေရာခံပါ။utm parameters တွေကိုutm ခြေရာခံခြင်းutm_ကမ်ပိန်းutm_ အကြောင်းအရာutm_လတ်utm_sourceutm_term
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းတို့၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ရလဒ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်များကို အသုံးပြုနေပုံ